★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း ကူညီရင်ငရဲကြီးမှာ စိုးရိမ်နေတယ်တဲ့
မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း ကူညီရင်ငရဲကြီးမှာ စိုးရိမ်နေတယ်တဲ့
ခင်ဗျားတို့က ကုလားတွေကို သိပ်ပြီး အထင်ကြီးတယ်။ မွတ်ဆလင်ဝါဒဟာ အရမ်းကို ယုတ်ညံ့ပါတယ်လို့ ကျုပ်တို့ပြောရင် မယုံကြဘူး။ အခုကြည့်လေ. . Allah က ပါကစ္စတန်ကို ပြစ်ဒဏ်ပေးထားတယ်လို့ မှတ်ယူပြီး ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကို လှူရင် ငရဲကြီးမှာကို စိုးရိမ်နေကြောင်း ကုလား ကိုယ်တိုင် ဒီမှာ မေးထားပါတယ်။ မြန်မာကုလားတွေက ဒုက္ခရောက်သူကို ကူညီရင် မွတ်ဆလင်မှာလဲ ကုသိုလ်ရတယ်လို့ နှစ်သက်ဖွယ်စကားမျိုး ပြောနေတာတွေ ကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီစကားဟာ လူကြားကောင်းအောင် လိမ်ညာပြောနေတာဆိုတာ အဲဒီဆွေးနွေးချက်က အဖြေထွက်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး မွတ်ဆလင်ဝက်ဆိုက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရင်လဲ . . . . တိုင်းပြည် ပျက်လုနီးပါး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကုလားတွေကို လှူဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေဟာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ လူအချင်းချင်းကို ကူညီရင် အပြစ်ဖြစ်မလားဆိုပြီး တွေဝေနေကတည်းက . . . အဲဒါဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ ဘာသာရေးလား? ယုတ်ညံ့တဲ့ အယူဝါဒလားဆိုတာ ရှင်းရှင်းကြီးသိနိုင်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းကူညီဖို့ အဲလောက်သတိထားနေရင် တခြားဘာသာတွေကို ကူညီဖို့ ကြုံလာရင် ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်နေမလဲဆိုတာကို ဥာဏ်ချဲ့ပြီးစဉ်းစားပါ။ တကယ်တော့ ကျုပ်တို့လို ဘာသာခြားတွေကို ကူညီဖို့နေနေသာသာ.. အပေါင်းအသင်းလုပ်ရင်တောင် ငရဲရောက်မယ်လို့ Quran မှာ ပြောထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကုလားတွေ လိမ်ညာတိုင်း မယုံကြဖို့ သတိပေးနေတာပါ။ ဒီအဖြစ်တွေကို ကြည့်ရင် ကျုပ်တို့ရဲ့ ရှေးကံကောင်းခဲ့လို့သာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရပြီး... အဲဒါကိုလဲဂုဏ်ယူထိုက်ကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာလည်း ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
☀ Flood situation in Pakistan Azaab-e-Elahi
☀wake up muslims floods in pakistan azabeallaihiah
☀Allahs Azaab On Lying Shia Scholar [Eye Opener For Shities]
☀ALLAH KA AZAAB
☀Azaab A Elahi
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 9:22 AM